Ny karatra Pokémon 12 lafo indrindra amin'ny tantara | la-manette.com
Ny karatra Pokémon 12 lafo indrindra teo amin'ny tantara
14 février 2021 feh JEAN-MICHEL CAPPIN
Avy any Charizard ka hatrany Pikachu, fantaro ny sarintany pokemon tsy fahita firy izay mitentina an'arivony euros.
Ny fangatahana tsy tapaka ny karatra Pokémon tsy fahita firy sy sarobidy dia nitarika ho amin'ny tabataba tany ivelany, izay nandany dolara an'hetsiny tamin'ny boaty tsy nosokafana sy karatra tsy fahita firy. Niditra an-tsehatra ihany koa ireo olo-malaza sy mpikatroka malaza tato anatin'ny roa taona, ka nahatonga ny toe-draharaha hipoaka. Tonga hatrany amin’ny toerana feno fivarotan’ireo mpanangom-bokatra sy scalper ary mpankafy ny magazay, izay samy nivondrona mba hamoronana seho mikorontana. Vokatr'izany rehetra izany dia nanomboka nampiato ny fivarotana karatra Pokémon ny fivarotana antsinjarany sasany. Fotoan-tsarotra izao, azo antoka.
(Ity lisitra ity dia navoaka voalohany tamin'ny 3 Jolay 2021. Nohavaozina tamin'ny karatra sarobidy kokoa).
Rehefa avy nahita izany rehetra izany ianao dia mety hanontany tena hoe inona no antenain'ny olona ho hita ao anaty fonosana. Sa mety te-hahafantatra ianao raha manana sanda ny fatorana feno karatra ao amin'ny efitranonao?
Related: Karatra Pokémon 21 lafo sy tsy fahita firy no namidy hatramin'izay
Rehefa avy nijery trano lavanty lehibe iray antsoina hoe PWCC Marketplace aho ary nanao fikarohana mahaleo tena, dia nahita lisitr'ireo karatra Pokémon tsy fahita firy sy sarobidy indrindra aho. Ho an'ity lisitra ity dia nanapa-kevitra ny hisoroka ny dika mitovy aho, satria raha tsy izany dia ahitana ny ankamaroan'ny karazana karatra Charizard sy karatra mpampiofana tokana ity lahatsoratra ity.
(Tiako ihany koa ny manamarika ny tsy fahampian'ny karatra pokemon Ishihara izay natao lavanty vao haingana tamin'ny vola mitentina $240. Izy io dia maneho ny ankehitriny PDG avy amin'ny orinasa Pokémon, Tsunekazu Ishihara, ary nozaraina tamin'ny tsingerintaona faha-60 tamin'ny 2017. Ny tena nahatonga an'io karatra tsy fahita firy io ho sarobidy kokoa dia ny hoe ny tale jeneralin'ny CEO dia nanao sonia an'io kopia io, izay manampy amin'ny fanazavana ny antony namidy azy io. Karatra mangatsiatsiaka, vidiny adala, fa ny sonia dia manakana azy tsy ho ao amin'ny lisitray satria mahatonga azy ho hafa amin'ny karatra Pokemon mahazatra sy tsy fahita firy araka ny hevitray).
Tandremo: Be ny isa ho hitanao. Indro, hatramin'izao, ny top 12 amin'ireo karatra Pokémon lafo indrindra teo amin'ny tantara.
Rayquaza, biby goavam-be angano nampidirina tao amin'ny Game Boy Advance version of Pokémon Emerald, dia zavaboary mahery izay tian'ny mpankafy hatry ny ela. Ity karatra Rayquaza ity dia avy amin'ny Ex Deoxys, fanitarana ny GTC Pokémon navoaka tamin'ny 2005 mba hiaraka amin'ny famoahana ny lalao video. Ny tena mampiavaka ity karatra efa tsy fahita firy ity dia ny fepetra sy ny kalitaony. Araka ny filazan'ny PSA, fikambanana mpanasokajy karatra hajaina, ny karatra dia voasokajy amin'ny toe-javatra misy ny mint, fantatra amin'ny indostria amin'ny anarana hoe GEM MINT 10. Ny fepetra tonga lafatra, amin'ity tranga ity, dia midika fa kely na tsy misy fahasimbana eo amin'ny sarintany. Anisan'ny anton'ny vidin'ity karatra ity ny fonosana booster Ex Deoxys tsy nosokafana dia tena tsy fahita firy amin'ny taona 2021 ary tsy miseho eny an-tsena matetika.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba mivantana mivantana mankany Twitch avy amin'ny PS4 anao
Related: Lalao tsara indrindra ho an'ny mpankafy Pokémon 2021
11. 1999 Tropical Mega Battle NO. 2 Mpanazatra
Ity karatra ity dia heverina ho iray amin'ireo karatra Pokémon tsy fahita firy sy sarotra indrindra hita hatramin'izay. Izy io dia maneho ny sarin'ny Exeggutor ao ambadiky ny famantarana ny fifaninanana Mega Tropical Battle. Nozaraina ho an'ny mpandresy vitsivitsy ihany izy io tamin'ny fifaninanana Pokémon japoney natao tamin'ny 1999. Vitsy amin'ireo karatra ireo no niseho teo amin'ny tsena misokatra na nolaharan'ny orinasan'ny karatra. Izany no manazava ny antony, na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra aza raha oharina amin'ny karatra hafa amin'ity lisitra ity, ity Tropical Mega Battle NO. 2 Mpanazatra dia mbola sarobidy ary nahatratra $ 50 mahery tamin'ny taon-dasa.
Ity no voalohany amin'ireo variana Charizard roa miseho amin'ity laharana ity, ary avy amin'ny fanitarana Ex Deoxys TCG tamin'ny taona 2005 ihany koa. hevi-dehibe vitsivitsy, ny tena miharihary dia ny sary. Ny karatra dia mampiseho dragona mifofofofo mafana kokoa, ny lokony dia maizina kokoa noho ny an'ny hafa. Mahery tokoa ireto karatra Gold Star ireto ka ny iray ihany no azonao anananao mandritra ny ady.
Related: Ahoana ny fomba hahazoana ny Nymphali, Phyllali, Givrali, Noctali, Mentali, Aquali, Voltali ary Pyroli amin'ny Pokémon Go
9. Tropical Mega Battle - Tropical Rivotra - PROMO karatra
Ny ankamaroan'ny karatra Pokémon sarobidy indrindra dia karatra fampiroboroboana avy amin'ny fifaninanana na hetsika manokana. Ity karatra amboara manokana ity dia nomena ny mpilalao nandritra ny Mega Tropical Battle, natao tany Hawaii tamin'ny 1999, tamin'ny fanasana ihany. Nandray anjara tamin’ity fifaninanana ity ireo mpilalao avy amin’ny lafivalon’izao tontolo izao. (Rehefa niova ny fitsipika, dia novana anarana ny hetsika isan-taona tamin'ny 2001, ka lasa tompon-daka eran-tany japoney). Na dia tsy fahita firy aza ny karatra, ara-mekanika dia karatra mpampiofana tena fototra, mitaky ny mpilalao hamadika vola madinika mba hamaritana ny vokatry ny hetsika iray. Araka ny filazan'ny PWCC, vitsy dia vitsy amin'ireo karatra amboara tropikaly ireo no misy eny an-tsena ary saika tsy misy na dia iray aza no madio tahaka an'ity dikan-teny ity dia nahazo ny GEM MINT 10 avy amin'ny PSA, izay natao lavanty amin'ny $ 65 mahery.
8. Karatra fampiroboroboana japoney 1998 - Trophy Magikarp avy amin'ny Oniversite Tamamushi
Ity karatra promo Magikarp mahagaga ity dia nozaraina nandritra ny fifaninanana roa andro tany Osaka, Japon, fa ho an'ireo mpifaninana izay nahavita ady iray farafahakeliny. Raha te handray anjara amin'ity hetsika ity ianao dia tsy maintsy nanao ny fitsapana hyper ao amin'ny Oniversite Tamamushi, izay navoaka vetivety tamin'ny gazety maromaro. Inona avy ireo fanontaniana? Tsy fantatray, satria tsy dia misy fampahalalana be loatra amin'ny Internet, saingy azo heverina fa mifandraika amin'ny Pokémon ilay fitsapana. Taorian'ny fitsapana rehetra, mpankafy 1000 ambony no nasaina hanatrika ny hetsika Osaka. Sarin'ilay mpanakanto Pokémon malaza Ken Sugimori, ilay karatra dia mampiseho Magikarp izay mitsambikina eny amin'ny rivotra miaraka amin'ny tselatra.
Related: Ny lalao Pokémon tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
7. Pokémon Super Secret Battle “Trainer # 1” - Holographic Promo Card
Karatra fampiroboroboana iray hafa, ity karatra mpanazatra Super Secret Battle ity dia nomena mpilalao fito teo ho eo tamin'ny 1999 tamin'ny fifaninanana nasionaly tany Japon. Niafina ny lalao famaranana tamin’ity fifaninanana ity. Ny mpilalao dia afaka mahita izany rehefa avy nahazo ny iray amin'ireo karatra ireo tamin'ny iray amin'ireo fifaninanana isam-paritra fito. Ity dikan-karatra manokana ity dia nomena ny GEM MINT 10 avy amin'ny PSA, izay manampy ny sandany. Anisan'ny mahatonga ny sari-tany hanirina ny zavakanto hafahafa, izay ahitanao fa tsy a Mewtwo galactic, fa koa ny famantarana ny karatra varotra Pokémon eo anoloana. Famolavolana tsy dia mahazatra loatra!
6. 2006 - Fampiroboroboana ny Tompondaka Eran-tany n ° 2 Mpanazatra
Karatra fifaninanana tsy fahita firy hafa, ity karatra promo Pokémon World Championship ity dia iray amin'ireo sarotra indrindra hita. Inoana fa karatra telo ihany no nozaraina tamin'ny 2006 tamin'ny fifaninanana telo andro natao tany Kalifornia. Ny sarin'ny karatra dia ahitana Pikachu 3D mahafatifaty mitazona amboara lehibe. Araka ny voalazan'ny PWCC, ity no hany ohatra iray amin'ireo karatra fampiroboroboana tsy fahita firy izay navoaka ho an'ny besinimaro, miaraka amin'ny isa ambony indrindra amin'ny 9 amin'ny toe-javatra misy. Noho ny tsy fahita firy sy ny naoty ambony (ary ny Pikachu mahafatifaty eo anoloana), ity karatra ity dia namidy mihoatra ny $ 100 tamin'ny lavanty natao tamin'ny fiandohan'ity taona ity nataon'ny PWCC.
Related: Ahoana ny fomba hahazoana Mewtwo amin'ny Pokemon Go?
Ity misy ohatra saika tonga lafatra amin'ny karatra tena malaza, andiany voalohany amin'ny Lugia. Ity dia Pokémon Generation II Legendary izay malaza hita eo amin'ny fonon'ny Pokémon: Silver. Tian'ny olona i Lugia, ka ara-teknika dia olona marobe no manana an'io karazana karatra io. Saingy ny ankamaroan'ny karatra Lugia amin'ity karazana ity dia tsy nahazo mari-pankasitrahana Pristine 10 avy amin'ny Beckett Grading Services, orinasa iray hafa manangom-bokatra karatra. Araka ny voalazan'ny PWCC, azo inoana fa mety hivarotra bebe kokoa amin'ny ho avy io karatra io.
4. Karatra Promo Japoney - Trophy hetsika ho an'ny fianakaviana - Kangaskhan Holo
Iray amin'ireo karatra Pokémon tsy fahita firy eto amin'izao tontolo izao, ity Kangaskhan ity dia nozaraina ho an'ireo mpandresy voafantina tamin'ny fifaninanana Mega Battle Parents / Children izay natao tany Japon tamin'ny taona 1998. Araka ny filazan'ny anarana dia fifaninanana nifaninanan'ny fianakaviana izy io. Fianakaviana nahazo fandresena maromaro ihany no nahazo ity karatra tsy fahita firy ity. Araka ny voalazan'ny PWCC, 46 amin'ireo karatra ireo ihany no nodinihin'ny PSA. Ity karatra fampahafantarana manokana ity dia nahazo naoty tonga lafatra 10 avy amin'ny PSA, sambany nahazo naoty toy izany ny iray amin'ireo karatra Kangaskhan Family Event tsy fahita firy. Izany dia manazava amin'ny ampahany ny vidiny lafo azony tamin'ny lavanty.
Vakio ihany koa: Ny tranga manafintohina tsara indrindra ho an'ny iPhone 13 sy iPhone 13 Pro
Related: Pokemon GO: Ahoana no hisambotra Shiny Wooper?
3. "Backless Blastoise" - Nanome baiko ny Hologram Galaxy Star
Tsy karatra Pokémon Blastoise mahazatra izany. Ny mahatonga azy io ho sarobidy dia ny tsy fisian'ny fanontam-pirinty eo amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny famolavolana, noho izany ny anarana hoe “Bastless Blastoise”. Raha ny marina, ity sarintany ity dia tsy natao ho an'ny daholobe velively, satria tao anatin'ny fitsapana nataon'ny Wizards of the Coast. Ny fahatsapana vonjimaika dia nitranga tamin'ny 1998, talohan'ny nanombohan'ny andiany tany Etazonia ary talohan'ny nahafantaran'ny olona iray fa hipoaka toy ny nataony ilay franchise.
2. Charizard andiany voalohany, Holographic - SGC GOLD LABEL PRISTINE 1
Ity Charizard manokana ity dia karatra tsy misy aloka holografika andiany voalohany. Ny karatra tany am-boalohany dia tsy nisy aloka tao ambadiky ny zavakanto na lahatsoratra, ary io fahasamihafana kely io dia nahatonga azy ireo ho amin'ny tsy fahampiana sy ny vidiny. Ankoatra izany, izy dia Charizard, dragona mahafinaritra izay tian'ny rehetra. Ny karatra Charizard dia nanjary nalaza be tato anatin'ny taona vitsivitsy, miaraka amin'ny olona toa an'i Logic misotro ronono misotro ronono sy ilay influencer malaza Logan Paul samy mandray anjara amin'ny hetsika ilay dragona malala. Nanao Charizard tsy fahita firy mihitsy aza i Paul nandritra ny ady nataony tamin'i Floyd Mayweather.
Related: Ahoana ny fomba handresena an'i Giovanni avy amin'ny Team Rocket amin'ny Pokémon GO
1. Karatra Promo Japoney 1998 - HOLO - Illustrator Pikachu - PSA 7 NRMT
Araka ny efa voamarikao, ny ankamaroan'ny karatra maka ny vidiny ambony indrindra amin'ny Internet dia tsy karatra Pokémon mahazatra. Fa kosa, karatra fampiroboroboana hafahafa izany, toa an'ity karatra Pokémon Illustrator ity, izay matetika mandoa vola be. Araka ny voalazan’ny PWCC dia 40 amin’ireo karatra ireo ihany no vita sy nozaraina. Nozaraina tamin'ny fifaninanana zavakanto telo notontosaina tany Japon izy ireo, izay tsy maintsy namoronan'ireo mpandray anjara ny karatra Pokémon azy manokana. Ireo mpandresy dia nahazo karatra vita pirinty manokana maneho ny sangan'asany tany am-boalohany, ary koa ity karatra Pikachu tsy fahita firy avy amin'ny Illustrator ity ho amboara. Ity karatra ity dia manasongadina asakanto manokana noforonin'i Atsuko Nishida, mpamorona ny toetran'i Pikachu tany am-boalohany. Noho izany, isaky ny mivarotra ity karatra tsy fahita firy ity dia mitondra vola be.
Ent ile de France - ho an'ny fifandraisana tsara kokoa ho an'ny vondrom-piarahamonina fanabeazana manontolo
Ankizilahy 8 taona dia mivarotra ny fanangonana karatra Pokemon mba handoavana ny fitsaboana ny alikany marary € 700